Orinasa sy mpanamboatra China TUNLAND | Foton
Fitaovam-piasana mahery vaika miaraka amin'ny sisin-tany rehetra
maotera Cummins F2.8-120 / 130KW
fahefana 85-96-120-130 / 3600kw
Torque 360/1800 ~ 3600,365 / 1600 ~ 3200N.M
Karazana mitondra fiara 4 * 4/4 * 2
Ny haben'ny ankapobeny 5310 * 1880 * 1860
Grille miendrika elatra miaraka amin'ny jiro diamondra kristaly, izay rehetra hanome anao traikefa amin'ny fahitana hafa sy mahavariana.
Ny rafitra mavitrika ao TUNLAND dia matanjaka sy azo itokisana, tsy ny fitehirizana solika sy ny famoahana ny emission ihany, fa ny fiantohana ny fitoniana, ahafahanao mankafy tanteraka ny fitiavam-bola ary mitondra anao mihoatra ny fetra.
Ny fitehirizana solika sy ny fahamendrehana tena tsara, ao anatin'izany ny endrika maivana, mifangaro ary modular;
Ny fotokevitra fampandrosoana ny fandoroana mahomby amin'ny alàlan'ny VVT roa sy valva efatra;
Ny fampiharana ny teknolojia fanaraha-maso mandroso elektronika;
Ny kodiarana tsy misy fikojakojana ary ny fitsapana ny fitsapana fiaretana nasionaly mihoatra ny 10 ora.
Firafitry ny vatana
Ny firafitry ny vatana matanjaka dia mifanaraka amin'ny fenitry ny fifandonana C-NCAP 4-Star
Anti-collision crumple frame rafitra Tsipika familiana azo zahana, valizy roa an'habakabaka manamafy ny fehikibo fiarovana
Rafitra azo antoka kokoa
Bosch rafitra ABS + EBD misy fantsona efatra. Fehin-kavanana tsy miendrika slip LSD-axle aoriana.
Famolavolana fenitra iraisana iraisam-pirenena
Takumi izay mandray andraikitra miaro ny fiarovana ny tanjon'ny fototra hamoronana fampisehoana azo antoka ambony, ny fampiasana ny volavolan-drafitra ho an'ny vatana avo lenta amin'ny fiarovana avo lenta avo lenta.
Chassis amin'ny faritra rehetra. Fahaizana ambony indrindra 60%. Sideslip zoro 40 degre.
Faharetana Ny fiara iray manontolo dia mamindra ny fitsapana azo antoka amin'ny toe-javatra mahatsiravina 1,6 tapitrisa kilometatra, ao anatin'izany ny mari-pana avo, ny hatsiaka avo, ary ny lembalemba ary ny fanombatombanana fiaretana nasionaly mirefy 160.000 kilometatra.
Fahaiza-miasa tena haingam-pandeha Hafainganana 160 km / h Fahafahana hazakazaka fatratra 2500 Kg entana mavesatra indrindra 1500 Kg